Anti-harassment Report Form (Strictly Confidential)ကာယိအိန္ဒြေပျက်ပြားနှောင့်ယှက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး အစီရင်ခံစာဖောင် (အထူး လျှို့ဝှက် ထိန်းသိမ်းရန်)
Reports of harassment may be submitted anonymously and we will review the validity of every report. However, in order for the incident team to conductafull investigation, we strongly urge the complainant to provide contact information so we can follow up.If you want more anonymity, simply leave your name off the form.
*You may need to login to your Google account if you wish to upload evidences. Images, videos, documents, images etc. We will keep it as evidence, but we will not store your email address.*
ကာယိအိန္ဒြေနှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်းကိစ္စရပ်များ၏ အစီရင်ခံတိုင်တန်းချက်များကို အမည်မသိ တင်ပြရန်ဖြစ်ပြီး အစီရင်ခံချက်တစ်ခုချင်းစီ၏ ခိုင်လုံမှုကို မိမိတို့အနေဖြင့် သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖြစ်စဉ်ဆောင်ရွက် ရန်အသင်းမှ အလုံးစုံ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို နောက်ဆက်တွဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တိုင်ကြားသူအား ဆက်သွယ်ရန် သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန် မိမိတို့အနေဖြင့်အထူးအရေးဆိုပါသည်။ မည်သူမည်ဝါမ ကြားသိစေခြင်းကို ပိုမိုလိုလားပါက ဖောင်အတွင်း သင့်နာမည်ကိုသာရိုးရှင်းစွာ ရေးသားခဲ့ပါ။
*သက်သေသာဓကများ - ရုပ်ပုံဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုအပိုင်းအစများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စသည်တို့ကို ပူးတွဲပေးပို့လိုပါက သင်၏ ဂူဂယ်လ်အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သက်သေသာဓကများကိုသာ ရယူထားမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ အီးမေးလ်းကို ထိန်းသိမ်းထားမည်မဟုတ်ပါ*
Date of incident (၁) ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်သည့် နေ့စွဲ (ဥပမာ - ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်) *
Date of report (၂) အစီရင်ခံသည့် နေ့စွဲ (ဥပမာ - ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်) *
Name of reporter (၃) အစီရင်ခံသူ၏ အမည်
Contact details(Phone number) (၄) ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (ဖုန်းနံပါတ်)
Contact details(Email) (၅) ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (အီးမေးလ်)
Encourage to enter valid email address able to contact you. သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်ရန် ခိုင်လုံသော အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုသည်
This form was created inside of Phandeeyar. - Terms of Service